छोरीभन्दा आमा ४ वर्ष कान्छी ! « Loktantrapost
छोरीभन्दा आमा ४ वर्ष कान्छी !
१९ फाल्गुन २०७४, शनिबार १२:१०
धुलाबारी । मेचीनगर नगरपालिका–१० धुलाबारीमा एक झुपडीमा बस्दै आएकी देउरानी चौधरीकी जेठी छोरी सरस्वतीको उमेर ५० बर्ष पुग्यो । तर, आमा देउरानीको नागरिकतालाई आधार मान्ने हो भने उनी ४६ बर्षकी मात्र भइन् । छोरीभन्दा आमा चार वर्ष कान्छी भइन् ।
२०६३ सालमा आएको घुम्ती शिविरमा नागरिकता बनाउँदा सरकारी कर्मचारीको लापरवाहीका कारण वास्तविक जन्म मिति र नागरिकताको जन्म मितिमा २७ वर्षको हेरफेर भएको देखिएको छ । नागरिकतामा साविक ज्यामिरगढी वडा नम्बर ६ स्थायी ठेगाना लेखिएकी देउरानीका अनुसार उनको जन्म विसं २००१ सालमा भएको हो ।
तर, नागरिकता बनाउँदा सरकारी कर्मचारीको चरम लापरवाहीका कारण उनी ७३ बर्षको हुँदासम्म पनि सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई दिने बृद्धभत्ता पाएकी छैनन् । उनले भनिन्, ‘टोलीमा नागरिकता बनाउँदा मैले एकसाले भनेकी थिएँ तर २८ साले पो लेखी दिएछन् ।’
उनलाई पहिलेदेखि नै चिन्ने धुलाबारीका प्रदिप राजवंशीले देउरानी चौधरीको उमेर ४६ वर्षको मात्र नरहेको बताए । उनले भने, ‘मान्छे हेर्दा नै थाहा भइहाल्छ नि, ७३ वर्ष हो की ४६ भनेर ।’
चौधरीको शारीरिक अवस्थालाई नियाल्दा उनको गालाको छाला झरेर घाँटीमा आइसकेको छ । वृद्धा अवस्थामा रहेकी उनलाई नागरिकतामा उमेर सच्याउने मेलोमेसो केही थाहा नभएका कारण अरु कसैले नागरिकताको जन्म मिति सच्याउन सहयोग गरिदिन्छ कि भनेर आश गरेर बसेको सुनाउँछिन् । आफ्ना सन्तानले पनि नहेरेपछि बृद्धा तथा अशक्त पति र दुई नाति नातिनालाई स्याहार्ने जिम्मा उनकै काँधमा रहेको छ ।
‘आफु एक्लैले घर व्यवहार चलाउनुपर्छ । त्यो भत्ता आइदिए पनि कति सजिलो हुन्थ्यो नि,’ उनले दुखेसो पोखिन् । उनी धुलाबारीमा जग्गा भाडामा लिएर आफैँले दुख गरेर बनाएको सानो झुपडीमा बस्दै आएकी छन् ।
यसबारेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग बुझ्दा त्यहाँको ढड्डामा पनि २०२८ सालकै भनेर लेखिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका नायब सुब्बा रमेश कोइरालाले टोलीमा नागरिकता बनाउँदा गल्ती भएको हुनसक्ने बताए ।
देउरानी मात्र होइन, मेचीनगर–१५ ज्यामिरगढीका मानबहादुर निरौलाको पनि समस्या उस्तै छ । निरौलाको नागरिकतामा २०११ साल उल्लेख भएकाले पनि ७० वर्षको हुँदा बृद्धभत्ता नपाउने अवस्था बनेको छ । आफु २००५ सालको भएको उनले दाबी गरे ।
आर्थिक अवस्था कमजोर भएका उनी नागरिकतामा गलत जन्म मितिका कारणले सरकारले ज्येष्ठ नागरिकका लागि भनेर दिएको सुविधा उपभोग गर्न बञ्चित भएका छन् । आगामी बर्षबाट बृद्धभत्ता खान पाउन तोकिएको ७० बर्ष पुग्ने भए पनि नागरिकताको गलत जन्म मितिका कारण उनी सो सुविधाबाट बञ्चित हुने भएका छन् । उनले २०४६ सालमा गाउँमा आएको टोलीबाट नागरिकता बनाएका थिए ।
नागरिकतामा देखिएको त्रुटि सच्याउनका वडा कार्यालय लाग्ने मेचीनगर नगरपालिका १५ का वडाध्यक्ष राजन भट्टराईले बताए । आफूहरुले पनि यो कुरा सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएको बताउँदै उनले स्थलगतरुपमा सरजमिन मुचुल्का उठाएर नागरिकता सच्याउन पहल गरिने भट्टराईले बताए । ‘उहाँहरु यस विषयलाई लिएर अहिलेसम्म हामीकहाँ आउनुभएको छैन । यदि यस्तो त्रुटि हो भने हामी सरजमिन गरेर नागरिकता सच्याउन पहल गर्नेछौँ ।’